အမေရိကန် ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ ~ မိုးညိုသား
အမေရိကန် ELECTRONIC DIVERSITY VISA LOTTERY ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ
12:43 PM ဗဟုသုတ No comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာမေးထားလို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ ကျွန်တော်တော့ တစ်ခါမှ မလျှောက်ဖူးပါဘူး...
ဆိုတာကို ကိုဇင် (အဓိပတိပစ္စယော) ရေးထားတာပါ
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီ အမေရိကန်နေထိုင်ခွင့်ကံစမ်းမဲကို အချက်အလက်ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်း ရေးတဲ့အတွက် ဘယ် ကမှ ဘာတစ်ပြားတစ်ချပ်မှမရဘူးဆိုတာတော့ ကြိုပြောပါရစေ။ အများတကာ အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ကြားလို့၊ အချက်အလက်တွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဖြည့်သွင်းရမှာဆိုတော့ ခက်နေလို့ပါဆိုလို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရေးပေးတာပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး လေ့လာပြီး ဘယ် လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပုံနဲ့တကွ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းက ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်လို့ အင်တာနက်နဲ့ မနီးစပ်တဲ့ သူတွေ သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ သူတွေပါ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားပြီး ရှင်းပြပေးပါမယ်။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမှာက အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ ပုံစံတစ်ခုအတွက် မိနစ် (၃၀) ပဲ အချိန်ပေးပါတယ်။ အချိန်အများကြီးလုံလောက်တယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်က အင်တာနက်မြန်နှုန်းနဲ့တော့ ကွက်တိကျရင် ကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို Upload လုပ်ပြီးတင်ရမှာမို့ပါ။ ဒါက လူလွတ်တစ်ယောက်ချင်းအတွက်ပါ။ အကယ်၍ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ဓါတ်ပုံ၊ သားသမီးတွေရဲ့ဓါတ်ပုံပါ တင်ရမယ်ဆိုရင် အချိန်ပိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းကောင်းတဲ့အချိန်ကို ရွေးချယ်ပြီးတင်ကြဖို့ အကြံပေး ချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်အလက်တွေကို အဆင်သင့်လုပ်ထားရပါမယ်။ ဥပမာ - မိသားစု ၅ ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ လျှောက်မှာက ဖအေနဲ့ မအေပဲ။ ဒါပေမယ့် သားသမီး ၃ ယောက်လို့ ဖြည့်သွင်းလိုက်တာနဲ့ အဲဒီသားသမီးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ မွေးသက္ကရာဇ် စတာတွေကို ဆက်တိုက်ဖြည့်သွင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်လည်းမကျော်သေး အိမ်ထောင်လည်းမကျသေးတဲ့ သားသမီးတွေကို မ်ိဘတွေရဲ့လျှောက်လွှာစာရင်းမှာ ဖြည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။ သားသမီးတွေထဲမှာ အထက်တန်းပညာရေးအဆင့်အထိရှိသူတွေအနေနဲ့ သီးခြားထပ်ပြီးလျှောက်ထားလို့ရပါသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုခုမှာ ၂ နှစ် လုပ်သက်ရှိသူတွေလည်း လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ တစ်မိသားစုလုံး တစ် ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် ကံထူးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတာပေါ့။
ပထမအဆင့်ပြင်ဆင်ရမှာက ဓါတ်ပုံကိစ္စကအရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ ဓါတ်ပုံဟာ 600 X 600 pixel ပတ်လည်အရွယ်အစားဖြစ်ရပါ မယ်။ JPEG format ဖြစ်ရပါမယ်။ 240 KB အလေးချိန်ပဲရှိရပါမယ် (ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ 200 KB ထက်မကျော်ရင်ပို ကောင်းတယ်)။ Image Color Depth က 24 bit ရှိရပါမယ်။ ဓါတ်ပုံအနားသား အဖြူကြောင်းတွေ မပါပါစေနဲ့။ အကယ်၍ Scan ဖတ်ထားတဲ့ပုံဆိုရင် 300 dpi ဖြစ်ရပါမယ်။ Photoshop အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါ။ ဘယ်လိုလုပ် ရမယ်ဆိုတာလည်း အသေအချာရှင်းပြပေးပါမယ်။
၂ လက္မပတ်လည် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ကာလာလိုင်စင်ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ မျက်မှန်တပ်ထားခြင်း၊ ဦးထုပ် ဆောင်းခြင်း၊ ပြုံးခြင်း၊ ရယ်ခြင်း၊ ခေါင်းငဲ့ ခေါင်းစောင်းမလုပ်ပါနဲ့။ ဓါတ်ပုံနောက်ခံအရောင်ဟာ ကြည်လင်ရှင်းလင်းတဲ့ အရောင်ဖြစ်ရ ပါမယ်။ ဆိုလိုတာက ရှေ့ကလူကို ထင်သာမြင်သာရှိစေတဲ့ နောက်ခံအရောင်မျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ ဓါတ်ပုံရှင်ရဲ့ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံးဟာ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုလုံးရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ရှိနေရပါမယ်။ အကျုံးဝင်တဲ့ ဓါတ်ပုံအနေအထားတွေကို http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photoexamples/photoexamples_5331.html မှာ ၀င်ရောက်လေ့လာပါ။ ရလာတဲ့ လိုင်စင်ပုံကို Scan ပြန်ဖတ်ရပါမယ်။ Scan ဖတ်တာ မတတ်ရင် ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ပါ။ Scan ဖတ်တဲ့အခါ Scanner Setting မှာ 300 dpi ကိုပြောင်းပါ။ 300 dpi နဲ့ Scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ Image Color Depth ဟာ 24 bit အလို အလျောက်ရသွားပါမယ်။ ဒီအခြေအနေအထိ ဓါတ်ပုံက Photoshop ပေါ်မှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံကို Crop ဖြတ်ရ မယ့်အပိုင်း ဖြတ်ပစ်ရပါမယ်။ Crop ရဲ့ Width နဲ့ Height တွေကို 600 in ထားပြီး Crop လုပ်ပါတယ်။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။ အပေါ် မှာပေးခဲ့တဲ့ Link ကိုဝင်ကြည့်ပြီး အချိုးအစားညီတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်အောင် Crop လုပ်ပါ။
ဓါတ်ပုံဟာ 600 ပတ်လည်တော့ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် 600 pixels ဖြစ်ဖို့ ပုံကို ညှိပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Photoshop ရဲ့ Menu Bar ပေါ်မှာရှိတဲ့ Image ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ထပ် Image Size ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ Image Size Box ကျလာပါမယ်။ Pixels Dimensions: ဆိုတဲ့အောက်က Width နဲ့ Height တွေကို အောက်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Pixels လို့ပြောင်းပြီး 600 စီပြောင်းပေးပါ။ OK နှိပ်ပါ။
ဒီအခြေအနေအထိ ဓါတ်ပုံဟာ Photoshop ပေါ်မှာပဲရှိပါဦးမယ်။ ဓါတ်ပုံကို JPEG format ဖြစ်အောင် Save လုပ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် Photoshop Menu Bar ပေါ်မှာရှိတဲ့ File ကိုနှိပ်။ Save ကိုဆက်နှိပ်။ Save Box ကျလာပါမယ်။ Save မယ့်နေရာ ကြိုရွေးထားပါ။ Desktop ဆိုရင်လည်း Desktop ပေါ့။
အပေါ်ပုံမှာကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ File name ကို မိမိနာမည်ပေးပါ။ Format ကို JPEG ပြောင်းပါ။ ပြီးရင် Save ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်ထပ် JPEG Option Box တစ်ခုထပ်ကျလာပါမယ်။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။ Image Options ထဲက အပေါ်ကိုထောင်နေတဲ့ မြှားတုံးကို large file ဖက်ကိုဆွဲယူသွားပါ။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ အောက်ဆုံးက Size ကိုလည်းကြည့်နေပါ။ ပုံမှာပြထားသလို 186 K သို့မဟုတ် 200 K လောက်ရရင် ရပ်လိုက်ပါတော့။ ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါ။ လျှောက်လွှာတင်ဖို့အတွက် အကျုံးဝင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရပါပြီ။
အခုပြောပြခဲ့တာတွေဟာ ရှုပ်ထွေးနေမယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်။ လိုင်စင်ပုံရိုက်က တည်းက Digital Camera နဲ့ရိုက်တဲ့ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံဆိုင်မှာ ရိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံကတော့ မဖြစ်မနေယူရမှာပေါ့။ Digital ပုံလည်းတောင်းပါ။ တောင်းတဲ့အခါမှာ Image Format = JPEG, File Size = 200 KB, Image Resolution = 600 pixels (width) and 600 pixels (height), Image Color Depth = 24 bit ရအောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောပါ။ ဆိုင်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက် သူတို့ လုပ်ပေး တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို USB Drive နဲ့ ထည့်ယူထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ပုံကို Upload လုပ်တဲ့အခါ USB Drive ထဲကပုံကို Upload တင်ပေးလိုက်ရုံပေါ့။ ယူလာတဲ့ပုံ Format ကျမကျ ပုံပေါ်မှာ ညာကလစ်နှိပ်ပြီး Properties ဆက်နှိပ်။ Details ဆိုတဲ့ Tab ပေါ် ကိုဆက်နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလို Dimensions, Width, Height နဲ့ Bit depth တွေ အံကိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျန်တာတွေက ကိစ္စမရှိပါ။
အဲဒီဓါတ်ပုံကို https://www.dvlottery.state.gov/photo.aspx ၀င်ပြီး Check လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Your photo is valid ဆိုရင် အဆင်ပြေပြီ။
အခုပြောတာအထိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအပိုင်းက ဓါတ်ပုံကိစ္စသက်သက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အကယ်၍ မိသားစုဝင်တွေများ တယ်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံဖိုင်တွေကို သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ပေးထားဖို့လိုမယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ထားရင် Upload တင်တဲ့အခါ ဓါတ်ပုံမှား တင်မိမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကတော့ လွယ်သွားပါပြီ။
နောက်ထပ်ပြောမှာက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး ဒုတိယပိုင်းလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ဖြည့်သွင်းရမယ့်အချက်အလက်တွေ ကြိုတင်ချရေး ထားတာကောင်းပါတယ်။ လျှောက်လွှာပုံစံမှာ ဖြည့်သွင်းရမယ့်အချက်အလက်က လူလွတ်တစ်ဦးတည်းအတွက်ဆိုရင် အချက်ပေါင်း ၁၄ ချက်ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်မိသားစုတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ တစ်ဦးချင်း အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လိင်အမျိုးအစား၊ မွေးဖွားရာမြို့၊ မွေးဖွားရာနိုင်ငံ၊ ဓါတ်ပုံ စတာတွေလိုအပ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်စာရင်းထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ အသက် ၂၁ နှစ်ကျော်ပြီးတဲ့သားသမီး။ အိမ်ထောင်ကျနေတဲ့သားသမီးတွေကို ချန်လှပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းမယ့်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကတော့ ....
၁။ အမည် - (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာလုံးကြီးဖြင့်)
၂။ မွေးနေ့ - အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်၊ အင်္ဂလိပ်လ၊ အင်္ဂလိပ်ရက်။
၃။ လိင် - ကျား/မ
၄။ မွေးဖွားရာမြို့ - (မွေးစာရင်းအမည်ပေါက်သည့်မြို့ သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုစာရင်းတည်ရာမြို့)
၅။ မွေးဖွားရာနိုင်ငံ - (မြန်မာနိုင်ငံ) (လျှောက်လွှာပုံစံမှာ Burma လို့ သုံးနှုန်းဆဲ)
၆။ ဓါတ်ပုံ - ၂ လက္မပတ်လည် (ကာလာလိုင်စင်)
၇။ လိပ်စာ - အိမ်ထောင်စုစာရင်းပေါက်ရာနေရာ လိပ်စာအပြည့်အစုံ ရပ်ကွက်၊ လမ်း၊ အိမ်နံပါတ်၊ မြို့။
၈။ လက်ရှိနေထိုင်ရာနိုင်ငံ (မြန်မာနိုင်ငံ) (လျှောက်လွှာပုံစံမှာ Burma လို့ သုံးနှုန်းဆဲ)
၉။ ဖုန်းနံပါတ် - မရှိရင် ထည့်ဖို့မလိုပါ။
၁၀။ အီးမေးလ်လိပ်စာ - အမြဲတမ်းသုံးသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာ
၁၁။ ပညာအရည်အချင်း - အနိမ့်ဆုံး အထက်တန်းပညာအရည်အချင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ် ၂ နှစ်အတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
၁၂။ အိမ်ထောင် - ရှိ/မရှိ
၁၃။ သားသမီး - ရှိ/မရှိ (ရှိလျှင်အရေအတွက်ဖော်ပြရန်) စတာတွေဖြည့်သွင်းရပါမယ်။
ရှေ့မှာ ၁၄ ချက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး အခုပြောတာ ၁၃ ချက်ပဲရှိပါတယ်။ လျှောက်လွှာလက်တွေ့ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမှာ အချက် ၁ ချက်က သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဖြည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာနေသော်လည်း နိုင်ငံ သားအရည်အချင်းမပြည့်မီသေးသူတွေ။ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်နေထိုင်နေရတဲ့သူများ ဖြည့်သွင်းရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအရည်အချင်းပြည့်မီသူတွေအတွက် အဲဒီအချက်ကို ဖြည့်သွင်းစရာ မလိုဘဲ ချန်ထားခဲ့ရပါမယ်။
လိုအပ်တာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းမှုအပိုင်းကို ဆက်သွားကြပါစို့။ ဒီမှာ အချက်တစ်ချက် ချင်းစီ ဘယ်လိုဖြည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။ အခုပြောခဲ့တာတွေကို အင်္ဂလိပ်စာတတ်ပေတတ် အွန်လိုင်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်တော့ ပျင်းစရာကြီးဖြစ်နေမလားပဲ။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ DV-2015 Program Instructions ကို http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions.pdf သွားပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် https://www.dvlottery.state.gov အရင်ဆုံးသွားရပါမယ်။ အခုပြောတဲ့ဆိုက်ကလွဲပြီး တခြားကိုမသွားပါနဲ့ ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ Website တွေနဲ့တွေ့နေပါ့မယ်။ အမေရိကန်ဗီဇာကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဟာ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘဲ လျှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ https://www.dvlottery.state.gov ဟာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Website အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကပဲ လျှောက်ထားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ Link ကို သွားလိုက်ပါ။ အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာက အောက်ကပုံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အောက်ဆုံးက Begin Entry ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
အဲဒီလို Begin Entry ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်ထပ် တစ်မျက်နှာထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ လျှောက်လွှာဖြည့် သွင်းသူဟာ လူသားလား ဆော့ဝဲလ်လားဆိုတာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Authentication Code ဆိုတဲ့အောက်က စာလုံးတွေကို ညာဖက်က အနီစက်ကလေးပြထားတဲ့ကွက်လပ်ထဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွင်းပြီ အဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Submit ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် လျှောက်လွှာပုံစံကျလာပါလိမ့်မယ်။
Authentication Code ကို ဖြေပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း လျှောက်ပုံစံစာမျက်နှာဆီရောက်ပါမယ်။ ဒါက Part One - Entrant Information ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ အချက် ၁၄ ချက် စပြီးဖြည့်ရပါတော့မယ်။ လူလွတ်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီ Part One ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ ပြီးပါမယ်။ အကယ်၍ အိမ်ထောင်သည် မိသားစုတွေဆိုရင်တော့ Part Two ကို ဆက်ဖြည့်ရပါမယ်။ Part One နဲ့ Part Two တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖြည့်သွင်းချိန် ၃၀ မိနစ်စီရပါမယ်။ စုစုပေါင်း ၆၀ မိနစ်ပေါ့။ လက်တွေ့မှာ အဲဒီလောက်မကြာပါဘူး။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင် စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ အထပ်ထပ်အပြန်ပြန်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အထိ အလွန်ဆုံးကြာရင် တစ်ပိုင်းကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပါပဲ။ အဲ မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက်မြန်နှုန်းကြောင့် ဓါတ်ပုံ Upload တင်တဲ့အခါ ချာလည်လည်နေမှာတော့ စိုးရိမ်ရတယ်။
ကဲ ... အပေါ်ကပုံကို ပြန်ကြည့်ဦးစို့။ အမှတ်စဉ် 1 မှာ Name (အမည်) ဖြည့်သွင်းရပါမယ်။ မြန်မာတွေမှာ Last/Family Name နဲ့ Middle Name ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေမရှိလို့ ကျနော်ကတော့ First Name နေရာမှာပဲ နာမည်အပြည့်အစုံကို ထည့်ပါတယ်။ အချို့ နာမည်သုံးလုံးရှိရင် သုံးနေရာ ခွဲထည့်တာတွေ့ရတယ်။ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပေါ့လေ။ First Name နေရာမှာ နာမည်အပြည့်အစုံ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးက No Last/Family Name နဲ့ No Middle Name ဆိုတဲ့နဘေးက လေးထောင့်ကွက်ကလေး တွေမှာ အမှတ်ခြစ်ကလေးတွေပေးခဲ့လိုက်ပါ။ ဒါ ပထမအဆင့် 1. Name ဆိုတာကို ဖြည့်လို့ပြီးပြီ။ အောက်မှာ နောက်တစ်ကြောင်းထပ် တွေ့ ရပါမယ်။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက်၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ်ကို ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှမခက်ပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ အကွက်မှာရှိတဲ့ အောက်ကိုဆိုက်နေတဲ့ မြှားကလေးတွေကိုနှိပ်ပြီး မွေးရက်၊ မွေးလတွေကို ရှာဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ မွေးနှစ်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရိုက်ရပါမယ်။ ဒီပုံထဲကအတိုင်း လိုက်မဖြည့်ပါနဲ့ ဒါက နမူနာနော်။
အခုပြောခဲ့တာအထိ 2. Birth Date ဆိုတဲ့အဆင့်အထိ ပြီးသွားပါပြီ။ အောက်မှာ နောက်ထပ်ထပ်ဖြည့်ရပါမယ်။ အဲဒါကတော့ လိင်အမျိုးအစား ခွဲခြားပြပေးရပါမယ်။ အမျိုးသားဖြစ်ရင် Male ဆိုတဲ့နဘေးက အ၀ိုင်းကလေးထဲကို မောက်စ်နဲ့ကလစ်ပြီး အမှတ်စက် ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အမျိုးသမီးဆိုရင် Female ဆိုတဲ့နဘေးက အ၀ိုင်းကလေးထဲကို မောက်စ်နဲ့ကလစ်ပြီး အမှတ်စက်ကလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါ 3. Gender ကိစ္စပြီးပြီ။
နောက်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ 4. City Where You Were Born, 5. Country Where You Were Born နဲ့ 6. Country of Eligibility for the DV Program တွေဖြည့်သွင်းတာကို တခါတည်းပြောသွားပါမယ်။ အမှတ်စဉ်4ကိုဖြည့်သွင်းရမှာက မိမိမွေးဖွားခဲ့ရာ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ်5ကတော့ မိမိမွေးဖွားရာ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ်6ကို ဘာမှသွားတို့စရာ ထိစရာမလိုပါဘူး။ ဒီအတိုင်း သာထားခဲ့လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် 7. Entrant Photograph ကို ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။ ဓါတ်ပုံဖြည့်သွင်း ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Photograp File Name ဆိုတဲ့ဘေးက Browse ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး ဓါတ်ပုံသိမ်းထားတဲ့ဆီကဓါတ်ပုံကို Upload တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ USB Drive ထဲမှာထည့်ယူလာတယ်ဆိုရင် USB ထဲကပုံကို တင်ပေးလိုက်ပေါ့။ မလုပ်တတ်ရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာလျှောက်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်က တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင် Browse ရဲ့ဘေးမှာ ဓါတ်ပုံ File Name ကလေးပေါ်လာမှာပါ။
နောက်တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမှာကတော့ အမှတ်စဉ် 8. Mailing Address ဖြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ ဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံထဲကအတိုင်းမဖြည့်ပါနဲ့ အဲဒါက လျှောက်ဖြည့်ထားတာနော်။ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ လိပ်စာပဲဖြည့်ပါ။
အပေါ်ပုံကိုပြန်ကြည့်ပါ။ 8.a In Care of ဆိုတာမှာ (Optional) လို့ပေးထားတဲ့အတွက် မဖြည့်ချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာထားခဲ့ပါ။ 8.b Address Line 1 မှာ အိမ်နံပတ်နဲ့ လမ်းနာမည်ထည့်ပေါ့။ 8.c Address Line2မှာ ရပ်ကွက် နာမည်ထည့်။ 8.d City/Town နေရာမှာ မြို့နာမည်ထည့်။ 8.e District/Country/Province/State နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် တိုင်းနာမည်တွေထည့်ပါ။ 8.f Postal Code/Zip Code ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးလေ့သုံးထမရှိလို့ ပုံမှာပြထားသလို အမှတ်ကလေး ခြစ်ပေးခဲ့လိုက်ပါ။ 8.g Country ကတော့ Burma လို့ဖြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အမှတ်စဉ် 8 ကိုဖြည့်လို့ပြီးပါပြီ။
နောက်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ 9, 10, 11, 12 တွေကတော့ လွယ်သွားပါပြီ။9မှာ Burma ပေါ့။ 10 မှာ ဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်ပေးလိုက်။ မပေးချင်လည်းရတယ်။ 11 မှာ ကိုယ်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ E-Mail လိပ်စာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ပါ။ ပုံထဲကဟာ သွားမထည့်နဲ့နော်။ 12 ကတော့ ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ အမှတ်စက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အထက်တန်းပညာအရည်အချင်း မရှိသူတွေကတော့ Primary School only ဆိုတဲ့ဘေးမှာထည့်လိုက်ပါ။ သူက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိတဲ့သူတွေ ထဲမှာ ပါသွားတာပေါ့။ ပညာအရည်အချင်းနည်းလို့ အားမငယ်နဲ့ အမေရိကန်က အလုပ်လုပ်တဲ့သူပဲလိုချင်တာ။ ပညာတတ်တွေဆိုတာ အများစုက ဖျံတွေချည်းပဲ။ လူ့ပေါ်ကျော့တွေ ရရာအလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ အစိုးရကိုလိမ်ညာပြီး ထောက်ပံ့ကြေးတောင်းစားနေတာ တစ်ပုံကြီးတဲ့။ အမေရိကန်ကမိတ်ဆွေတွေပြောပြလို့ သိတာနော်။
နောက်အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ 13 နဲ့ 14 က ရှင်းတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိမရှိ။ ကလေးရှိမရှိဒါပါပဲ။ 13. Wath is your current martial status? ဆိုတဲ့နေရမှာ အိမ်ထောင်မရှိရင် Unmarried, အိမ်ထောင်ရှိရင် Married, ကွဲနေရင် Divorced, ခင်ပွန်း ဇနီးဆုံးသွားရင် Widowed ဆိုပြီးရှိတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့နားမှာ အမှတ်စက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီ။ အောက်ဆုံးက Legally Separated ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလေ့မရှိလို့ စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။
အဲ အိမ်ထောင်တော့မရှိဘူး တရားဝင်မွေးစား ထားတဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုရင် ကလေးအရေအတွက်ကိုထည့်ပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် Part Two ကို ဆက်ဖြည့်ရပါမယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ ဓါတ်ပုံတွေ ထည့်ဖြည့်ရပါမယ်။ ဒါက လွယ်သွားပြီ ရှေ့ကပြောခဲ့သလို အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားရုံပဲ။
တစ်ယောက်တည်းသမား Unmarried ဆိုရင်တော့ Part One ဖြည့်ပြီးလို့ အောက်ဆုံးက Continue ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖြည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေ ပြန်စစ်ဆေးဖို့ အချက်ပေးစာမျက်နှာ နောက်တစ်ခုပေါ်လာမယ်။ ဒီမှာပြန်စစ်ဆေးပေါ့။ မှားနေတယ်ဆို ရင် Go Back to Part One ကိုကလစ်ပြီး ပြန်ပြင်ပေါ့။ ပြင်လို့ပြီးပြီ အားလုံးစိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Continue ကိုပြန်နှိပ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ပြန်စစ်ဆေးဖို့ အချက်ပေးစာမျက်နှာ ပြန်ပေါ်လာမှာပဲ။ သေချာပြီဆိုရင် အဲဒီစာမျက်နှာကို Print လုပ်ပြီးယူထားဖို့ ပြောလိမ့်မယ်။ အဲဒါ နောက်ပိုင်းလိုအပ်ရင် သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့။ Print လုပ်ထားချင်ရင်လည်းလွယ်တယ်။ လက်ရှိ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းနေတဲ့ Mozilla Firefox Browser ရဲ့ Menu Bar က File ကိုနှိပ်ပြီး Print ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ PDF Version နဲ့ Print ယူ ထားပြီး USB Drive ထဲ ထည့်သိမ်းထားလည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အီးမေးလ်ထဲမှာ Attached File လုပ်ပြီး Draft ထဲမှာသိမ်းထား ရင်ပိုကောင်းတယ်။
ကောင်းပြီ Print ယူပြီးတာနဲ့မပြီးသေးဘူး။ Continue ကို ဆက်နှိပ်ရမယ်။ အဲဒီကျတော့မှ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကို ရောက်တာ။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်လျှောက်လွှာကို လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာ ပြောတဲ့စာမျက်နှာ ထပ်ထွက်လာမယ်။ ဒါအရေးအကြီး ဆုံးပဲ။ စာမျက်နှာကို Print လုပ်ပြီး ယူကိုယူထားရမယ်။ Entrant Name, Confirmation Number, Year of Birth တွေက DV 2015 ပေါက် မပေါက် ပြန်စစ်ဆေးဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကံစမ်းမဲပေါက်သူတွေကို စာလည်းပို့မှာမဟုတ်သလို အီးမေးလ်ကလည်း အကြောင်း ကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ ကံစမ်းမဲပေါက် မပေါက် ကိုယ့်ဘာသာကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို Print ထုတ် ယူထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် PDF Version နဲ့ Print လုပ်ပြီးသိမ်းထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ လျှောက်ထားမှု အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
အဲ ... Part Two ဆက်ဖြည့်ရမယ့်သူတွေအတွက်လည်း အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Part One ကိုဖြည့်ပြီးတာနဲ့ Continue ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Part Two ကို ဆက်ဖြည့်ရပါမယ်။ Part One နဲ့ Two နှစ်လုံးဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Continue ကိုနှိပ်လိုက် တာနဲ့ ပြန်စစ်ဆေးဖို့ အချက်ပေးစာမျက်နှာ နောက်တစ်ခုပေါ်လာမယ်။ ဒီမှာပြန်စစ်ဆေးပေါ့။ Part One မှာ မှားနေတယ်ဆိုရင် Go Back to Part One ကိုကလစ်ပြီး ပြန်ပြင်ပေါ့။ Part Two မှာ မှားနေတယ်ဆိုရင် Go Back to Part Two ကိုကလစ်ပြီး ပြန်ပြင်ပေါ့။ ပြင်လို့ပြီးပြီ အားလုံးစိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင် Continue ကိုပြန်နှိပ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ပြန်စစ်ဆေးဖို့ အချက်ပေးစာမျက်နှာ ပြန်ပေါ်လာမှာပဲ။ သေချာပြီဆိုရင် အဲဒီစာမျက်နှာကို Print လုပ်ပြီးယူထားဖို့ပြောလိမ့်မယ်။ အဲဒါ နောက်ပိုင်းလိုအပ်ရင် သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့။ Print လုပ်ထားချင်ရင်လည်း လွယ်တယ်။ လက်ရှိ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းနေတဲ့ Mozilla Firefox Browser ရဲ့ Menu Bar က File ကိုနှိပ်ပြီး Print ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ PDF Version နဲ့ Print ယူထားပြီး USB Drive ထဲ ထည့်သိမ်းထား လည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် အီးမေးလ်ထဲမှာ Attached File လုပ်ပြီး Draft ထဲမှာသိမ်းထားရင် ပိုကောင်းတယ်။
ကောင်းပြီ Print ယူပြီးတာနဲ့မပြီးသေးဘူး။ Continue ကို ဆက်နှိပ်ရမယ်။ အဲဒီကျတော့မှ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကို ရောက်တာ။ အပေါ်ပုံမှာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်လျှောက်လွှာကို လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာပြောတဲ့ စာမျက်နှာထပ်ထွက်လာမယ်။ ဒါအရေးအကြီးဆုံးပဲ။ စာမျက် နှာကို Print လုပ်ပြီး ယူကိုယူထားရမယ်။ Entrant Name, Confirmation Number, Year of Birth တွေက DV 2015 ပေါက် မပေါက် ပြန်စစ်ဆေးဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကံစမ်းမဲပေါက်သူတွေကို စာလည်းပို့မှာမဟုတ်သလို အီးမေးလ်ကလည်း အကြောင်းကြားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကံစမ်းမဲပေါက် မပေါက် ကိုယ့်ဘာသာကို စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Print ထုတ်ယူထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် PDF Version နဲ့ Print လုပ်ပြီးသိမ်းထားပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ လျှောက်ထားမှု အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ကံစမ်းမဲပေါက်တယ် မပေါက်ဘူး ဘယ်အချိန်ပြန်စစ်ဆေးရမလဲ။ ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုသိရမလဲ။ ဒါ အရေးကြီးဆုံးပေါ့။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး Print လုပ်ယူထားတဲ့ Entry Received ထဲက အချက်အလက်တွေနဲ့ ၂၀၁၄ မေလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်းမှာ https://www.dvlottery.state.gov/ESC/ ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားပြီး စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲက အချက်အလက်တွေကို ဒီမှာဖြည့်သွင်း Submit ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ SELETED ဆိုရင်တော့ ကံစမ်းမဲပေါက်ပြီ။ သံရုံးကိုသာ ဆက်သွယ်ပေတော့။ ကံကောင်းကြပါစေ။
အကယ်၍များ ဒီထက်ပိုပြီးသိချင်တာရှိရင်ဖြစ်စေ လိုအပ်နေတာကို ထောက်ပြချင်တာဖြစ်စေ ဒီ Post အောက်မှာ Comment ပေးထားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ kozin88@gmail.com ကို စာပို့ပြီးတော့လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ကူညီပါ့မယ်။ ကံစမ်းမဲပေါက်အောင်တော့ အိုဗားမားတောင် မကူညီနိုင်လို့ ကျနော့်ကိုလည်း အကူအညီမတောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာ။
Laptop ကလေးကလည်း မစုတ်ဘူး၊ လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင် Video Tutorial ကလေးတစ်ခုလုပ်ပြီး Youtube မှာ တင်ပေးချင်တာပါ။ အဲဒါဆိုရင် ပိုရှင်းတာပေါ့ဗျာ ........... ။ နောင်နှစ် DV 2006 ကျရင် အဲဒါလေးအကောင်အထည်ဖော် နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါ့မယ်။ အဲ ... အမေရိကန်ရောက်ပြီး အလုပ်များနေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးနော်။ ဟဲ ဟဲ ........။ လျှောက်သူတိုင်း ပေါက်နိုင်ကြပါစေ ......။ အဲ ... ကံကောင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ။
၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိပဲ လျှောက်လွှာတွေကိုလက်ခံမှာမို့လို့ အမြန်ဆုံးသာ လျှောက်လိုက်ကြပါတော့။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၃) ရက်။
အခု Post ကို PDF ဖိုင်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်ချင်ရင်တော့